မြန်မာ့ဆန် အိုင်ဗရီကို့စ်တွင် ဖျက်ဆီးခံရသော်လည်း ပြည်ပဈေးကွက်ကို ထိခိုက်မှုမရှိနိုင် ဟုဆ? - Yangon Media Group
မြန်မာ့ဆန် အိုင်ဗရီကို့စ်တွင် ဖျက်ဆီးခံရသည် ဟုဆိုသော်လည်း ပြည်ပဆန်ဈေးကွက်အပေါ် ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။ ဧပြီ၂၂ရက် မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်စက်မှုလက်မှုအသင်းချုပ်တွင် ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူများက အထက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းဆန်များကို သင်္ဘောပေါ်တွင် ကြာမြင့်စွာသိုလှောင်မှု၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း၌ ဆန်တင်သည့်အချိန်တွင်မိုးစိုသွားခြင်းနှင့် အစိုဓာတ်ကို ဆန်ဝယ်အဖွဲ့အစည်းအများစုက သိရှိပြီးဖြစ်၍ ယင်းဖြစ်စဉ်အပေါ် Buyer အများစု နားလည်သဖြင့် ပြည်ပသို့ဆန်တင်ပို့မှုအပေါ် သက် ရောက်မှုမရှိနိုင်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်သန်းဦးက ပြောသည်။
”အာဖရိကနိုင်ငံမှာ ဝယ်ယူစား သုံးနေတဲ့စားသုံးသူတွေက သတင်းအချက်အလက်ရော နည်းပညာပိုင်း ဆိုင်ရာရောသိရှိမှုအားနည်းလို့ စားသုံးသူတွေ ဒီကိစ္စကိုကြာမြင့်စွာသို လှောင်မှုကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ခုလိုမျိုးမီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲကနေ သတင်းစကားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကဆန်စပါးလုပ်နေတဲ့သူတွေက ဒီကိစ္စက ကြာမြင့်စွာသိုလှောင်မှုကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို လတ်တလော အနေအထားတစ်ခုမှာထူးခြားတဲ့ သက်ရောက်မှုမရှိဘူးဆိုတာ အားလုံးသိရှိကြပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
”အာဖရိကနိုင်ငံ အများစုဟာ ဗြိတိသျှကိုလိုနီနိုင်ငံတွေ ယခင်က ပေါ့နော်။ ပြင်သစ်ကိုလိုနီနိုင်ငံတွေ ဖြစ်တော့ ဒီထရေးဒင်းကုမ္ပဏီအကြီး တွေ၎၊ ၅၊ ၆ခုက ဈေးကွက်ကိုတော် တော်ချယ်လှယ်တယ်။ အာဖရိက Buyer သေးလေးတွေလုပ်လို့မရဘူး။ သူတို့ကိုယ်တိုင် လုပ်ဖို့လည်းခက်တယ်။ နောက်တစ်ခါ ဒီကုမ္ပဏီကြီး တွေက ပြိုင်ဆိုင်မှုကအရမ်းပြင်းထန်တယ်။ အချို့ကုမ္ပဏီကြီးတွေက ပါကစ္စတန်နိုင်ငံက ဝယ်တာများတယ်။ အိန္ဒိယကဝယ်တာများတယ်။ အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန်က Logistic အရနီးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက နည်းနည်း လှမ်းတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကဈေးလည်းသက်သာတယ်။ Logistic အရဝေးတဲ့အနေအထားရှိပေမယ့် ဈေးသက်သာတာကြောင့် ပါကစ္စတန်၊ အိန္ဒိယတို့ဆန်တွေနဲ့ သွင်းသူအချင်းချင်း ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တယ်။ အခုလည်း ပြင်းထန်တယ်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုကတော့ ဈေးကွက် သဘောတရားအရတော့ဆက်ရှိနေမယ်။ ဒီယှဉ်ပြိုင်မှုကြောင့်လည်း ဒီကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ ယူဆတယ်။ အထူးသဖြင့် တိုဂိုနိုင်ငံမှာ ဒီသင်္ဘော ရောက်သွားချိန်မှာ တိုဂိုနိုင်ငံမှာဆန် သင်္ဘောမချနိုင်တာ အရည်အသွေး စစ်ဆေးချက်တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် မဟုတ်ဘူး။ တစ်ဖက်နိုင်ငံက အာဖ ရိကနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ သူ့ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဘူဂီနာဖာဆို နိုင်ငံကဝန်ကြီးဌာနကလှမ်းပြီး တိုဂိုနိုင်ငံမှာ ဒီသင်္ဘောကပ်ခွင့်မပေးဖို့ လှမ်းကန့်ကွက်တာ။ ဒီလိုမျိုးဟာတွေရဲ့ သက်ရောက်မှုနဲ့နောက်ကွယ်က အခြေအနေတွေက ဈေးကွက်ယှဉ် ပြိုင်မှုတွေ ဒီအပိုင်းတွေလည်းအများ ကြီးရှိမယ်လို့မှန်းဆပါတယ်”ဟု မြန်မာ နိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရဲမင်းအောင်က ပြောသည်။
လာမယ့်နှစ်အတွက် အစိုးရချင်းရောင်းချမှုများ ဆောင်ရွက်နိုင် ရန်ညှိနှိုင်းပေးမှုများ၊ ဆန်စပါးအသင်းချုပ်အနေဖြင့်လည်း တရုတ်နိုင်ငံ အပါအဝင် အခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ၊ ဥရောပ၊ အာဖရိကဈေးကွက်များကို ဈေးကွက်ထိုးဖောက်ရန် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းဖြစ်စဉ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ အိတ်စ်ပို့တာများနှင့် ရှစ်ပါများနှင့် မသက်ဆိုင်တော့ကြောင်း Buyer ဖြစ်သည့် Olam ကုမ္ပဏီနှင့်သာသက်ဆိုင်ကြောင်း၊ သို့သော် မြန်မာ့ဆန်ဖြစ်နေသည့်အတွက် Olam ကုမ္ပဏီကို ဖြေရှင်းပေးရန် တောင်းဆိုထားကြောင်း ဦးရဲမင်း အောင်က ပြောသည်။
”အာဖရိကဈေးကွက်ကတော့ ယှဉ်ပြိုင်မှု အင်မတန်ပြင်းထန်ပါတယ်။ ရေရှည်မှာ ဒီထက်ပိုကောင်း မွန်တဲ့နည်းဗျူဟာတစ်ခုနဲ့ အာဖရိက ဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်ဖို့ ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိပါတယ်။ မကြာခင် အသိပေး ကြေညာပါမယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ယင်းဆန်များကို မြန်မာနိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီသုံးခုဖြစ်သော ရွှေဝါရောင် MEC နှင့် ဧရာဟင်္သာကုမ္ပဏီတို့က စုစုပေါင်းတန်ချိန် ၂၂ဝဝဝရောင်းချ ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်အခြေစိုက် စင်ကာပူကုမ္ပဏီ Olam International Co.,Ltd ကဝယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ”Olam နဲ့ပတ်သက်လို့ သူတို့ ကျွန်တော်တို့ကို ဘယ်လိုတုန့်ပြန်မလဲ။ တုန့်ပြန်တဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီး ဒီနိုင်ငံကို သတင်းစကားပေးမယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ သံတမန်နည်းလမ်းအရ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ လတ်တလောတွင်း ယင်းဖြစ်စဉ်ကြောင့် ပြည်ပသို့ဆန်တင်ပို့မှာ ရပ်တန့်သွားခြင်းမရှိဘဲ ဆက်လက်တင်ပို့မှုများရှိနေကြောင်းသိရသည်။
နိုင်ဂျီးရီးယား အနောက်မြောက်ပိုင်း အပန်းဖြေမြို့ကလေး၌ သေနတ်သမားတစ်ဦး အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ်၊ ??
စိန့်ပီတာစဘတ်စ် မြို့ရှိ စူပါမားကတ် တစ်ခုတွင် လက်လုပ် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူ ၁၀ ဦး ဒဏ်ရာ
တောထိုင်ဓလေ့ ယနေ့တိုင်ရှိ၊ ရွာအချို့တွင် အိမ်သာ တစ်လုံးပင် မရှိ
ပြည်ခိုင်ဖြိုးကို လူမှုကွန်ရက်မှ တိုက်ခိုက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းရှိသည်ဟုပြောဆိုခြင်းမှာ NLD ပါ??